Inguva yekumira Yega Mota Yekuburitswa Kuburitswa kweSEO | Martech Zone
Inguva yekumira Yega Mota Yekuburitsa Kuburitswa kweSEO
China, November 20, 2014 China, November 20, 2014 Douglas Karr
Imwe yemasevhisi atinopa kune vatengi vedu ndeyekutarisa mhando ye backlinks kune yavo saiti. Sezvo Google yatarisisa madomeni ane zvinongedzo kubva kunonetsa masosi, isu takaona vanoverengeka vevatengi vachirwira - kunyanya avo vakashandira SEO mafemu munguva yakapfuura iyo yakadzokera kumashure.
pashure disavowing ese maratidziro asina mubvunzo, taona kuvandudzwa kwekumisikidzwa pane akawanda masayiti. Inzira inonetsa apo chese chinongedzo chinotariswa nekusimbiswa kuti chione kuti chinobva kune yakanaka sosi ... kana sosi haina kuwanda ne spammy zvinongedzo kune mamwe maricho madomeni.
Mwedzi uno, apo isu tichiongorora mumwe wevatengi vedu, takaona dura rinozivikanwa kwazvo raive nezvimwe zvinongedzo zvinonetsa pairi - PRWeb. Takabvunza PR dhipatimendi remutengi uye vakaona kuti vaibhadhara otomatiki kuburitswa kwemapepanhau kuburikidza nebasa rePRWeb.
Isu takazoita kumwe kuongorora kwePRWeb uye nemamwe otomatiki kushambadzira ekuparadzira masevhisi uye takawana imwe data inoshungurudza. Zvinotaridza ese PRLeap uye PRWeb anga ari mune emahara-kudonha pamatanho kubvira pakaburitswa Panda 4.0.
Pane zvakawanda zvekutaura nezve izvi muSEO indasitiri - vamwe vanhu vanoti kugovera kuchiri kushanda, vamwe vakataura kuti havangabata bata rekuburitsa rekuparadzira sevhisi. Izvo hazviratidzike kuti ese masevhisi ekuparadzira masevhisi akadonha sePRWeb nePRLeap.
Izvi ndizvo zvandinotenda.
Ini ndinofunga otomatiki midhiya kuburitswa kwekuparadzira kwafamba kosi yacho. Hatina kuona mutsauko mukusimudzira kwedu patakashandisa kugoverana maringe nekusashandisa kugovera. Ini handitende kuti chero munhu anotarisa masosi enhau ekuburitswa kwemapepanhau nekuti ruzha harutsungike. Uye kana iwe ukawana mushumo kubva kumasevhisi, ivo vanoratidza toni yezvinoonekwa asi iwe uchaona zvishoma kana kusava netapuro pamugwagwa kudzoka kune yako saiti.
Izvi zvinoreva here kuti handitendi muPR? Zvirokwazvo kwete. Ini ndinotenda zano rinoshanda rehukama neruzhinji uko nhau dzinosundirwa kunzvimbo dzakakodzera midhiya ichiri zano rakanaka kwazvo. Ndiro sevhisi inoda maturusi ekutsvagisa, nguva uye nesimba saka zvinodhura zvakati wandei. Asi iwe unowana chaunobhadhara.
Hatisisiri kuisa mari mupepanhau kuburitswa kwekutsvagisa kwekutsvaga kwedu injini dzekutsvaga. Izvo hazvina basa, haisi kusvika kune vateereri vanokodzera, haisi kupa chero mhinduro, uye - zvakanyanya - zvinogona kunge zviri kuisa vatengi vedu panjodzi nekuisa zvinongedzo kunzvimbo yavo kumatunhu ane masimba anotyisa. Izvo zvinogona kunge zviri kuisa yavo organic makero uye traffic panjodzi.
Tags: otomatiki kuburitswa kwekuburitsabacklinkingBacklinksmupepanhaumuchina wekuburitsaprleapprwebsearch engine rankingstsvaga rankingsseo
Douglas Karr Thursday, November 20, 2014 Thursday, November 20, 2014
4 Mazano Ekuita Yako Yemavhidhiyo Vhidhiyo Strategiki Kubudirira
Gadzirisazve, Nyorazve uye Regedza Zvemukati
Mbudzi 26, 2014 na2: 05 PM
Ndatenda nekunyora pane ino nyaya Doug. Ini ndaingotarisa kuPRWeb rimwe zuva ndichiyedza kufunga kuti kana otomatiki kugovera ndiyo nzira yekuenda kana kwete. Chinyorwa chako chakandibatsira kugadzirisa pfungwa dzangu pane izvozvo! Semazuva ese, iwe wakayambuka zvakare! Ndatenda!